Raadinta Mushaharka Leh Miyay Baadhitaan Ku Samaynaysaa Organic? | Martech Zone
Raadinta Mushaharka Leh Miyay Baadhitaan Ku Samaynaysaa Organic?
Talaado, July 24, 2012 Sabtida, Janaayo 14, 2017 Douglas Karr
Econsultancy ayaa dhowaan sameysay maqaal ku saabsan sida natiijooyinka raadinta lacag bixinta ayaa xukumaya boggaga natiijooyinka mashiinka raadinta qaarkood. In kasta oo tani ay kordhiso qiimaha guud iyo dakhliga la xiriira bogga natiijooyinka mashiinka raadinta, anigu kama rajo qabo in ay kordhineyso qiimaha isticmaalaha raadinta.
Waa kan shaashadda “kaararka deynta” bogga natiijooyinka mashiinka raadinta:
Waa kan weyn infographic oo ka socda WordStream oo ku saabsan dooda lacag-bixinta iyo raadinta dabiiciga ah. In kasta oo suuqleyda ay ku doodi karaan midkee saameyn badan leh, haddii Google uu sii wado inuu yareeyo qaybta raadinta dabiiciga ah ma jiraan dood badan oo la qabo. Waxaan u maleynayaa inay noqon doonto maalin murugo leh suuqgeynta internetka marka shirkad weyn aysan si fudud u shaqeyn karin si ay u horumariso waxyaabo waaweyn oo ay u hesho dareenka ay mudan tahay.
Google wuxuu aasayaa Warshadaha SEO
Booshaka: Fahmitaanka, Kaqeybgalka iyo Kordhi on Facebook
Jul 26, 2012 markay ahayd 4:17 AM
Runtii maahan xitaa su’aal. "LACAGTA LA SOCO" Google ayaa isbedelkeeda oo dhan sameeyay maxaa yeelay natiijooyinka ayaa xumaa. Marar badan jeer Iskaashatooyinku waxay bixiyaan macluumaad dheeraad ah - waa cilmi-baaris lagu heli karo waxyaabo loo beddelo. Google waxay sameysay isbadaladaas maxaa yeelay wax lacag ah kama helaan SEO-ga. Sidaa darteed waxay aadeen goobaha waaweyn / sumadaha si ay lacag ugu qaataan Adwords halkii ay ka ahaan lahaayeen SEO. Kadibna waxay isku dayeen inay abaalmariyaan kuwa adeegsanaya Google+ si ay xog dheeraad ah u helaan.
Difaaca dhexdiisa, waxay uga digayaan xiriiriyeyaasha "spam" - aka si kasta oo aad adigu xiriir u sameysan karto naftaada - ilaa 2008. Ma aanan dooneynin inaan dhagaysanno. Kaliya waxaan jeclaan lahaa inaan haysto PRWeb kahor Gu'ga 2011.
Jul 27, 2012 markay ahayd 5:46 AM
Faahfaahin weyn oo si fiican loo baaray. Beisde tan ka dib markii la cusbooneysiiyo penguin-ka google fiiro gaar ah u yeelo raadinta dabiiciga ah. Warshadaha SEO ayaa sidoo kale saameeyay tan. Xayaysiisyada lacagta la siiyaa way korayaan.
Waxaan rajeyneynaa in cusbooneysiinta soo socota ay noqon doonto mid ku habboon dabiiciga.
Waad ku mahadsantahay wadaag